ဘရာဇီးလ်အသင်း (၄)ကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၁၅)
25 Jun 2018 . 9:57 PM
အမေရိကန်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ဖလား သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ကို ရရှိခဲ့ပြီး တစ်ပွဲ ပျှမ်းမျှပရိသတ် (၇၀၀၀၀)နီးပါးအထိရှိခဲ့လို့ ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက် ပရိသတ်အများဆုံး ကြည့်ရှုတဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်။ အခုတစ်ကြိမ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ပြောင်းလဲမှုတွေ အမြောက်အများရှိခဲ့တယ်။ နိုင်ပွဲ (၁)ပွဲကို (၃)မှတ် စတင်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ကစားသမားတွေရဲ့ ဂျာစီမှာ နာမည်ရေးထိုးခြင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်။ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် နေရာလိုက် အကောင်းဆုံး ကစားသမားတွေကို ရွေးချယ်ကာ အကောင်းဆုံးအသင်း (All Star)ကို စတင်ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
အုပ်စုပွဲစဉ်အဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ အိမ်ရှင်အမေရိကန်နဲ့ ကိုလံဘီယာတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းမိခဲ့တဲ့ ကိုလံဘီယာနောက်ခံလူ အက်စ်ကိုးဘား မိခင်နိုင်ငံကို ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး (၅)ရက်အကြာမှာပဲ သေနတ်သမားတွေရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ၀မ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဗိုလ်လုပွဲကို ဘရာဇီးလ်အသင်းနဲ့ အီတလီအသင်းတို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်အထိ ခံယူခဲ့ရကာ ပထမဆုံး ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ် ခံယူခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ် ခံယူရာမှာတော့ အီတလီအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူး ဘက်ဂီယိုရဲ့ ကန်ချက် လွဲချော်ခဲ့လို့ ဘရာဇီးလ်အသင်းက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရကာ (၄)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဆုကို ရရှိတဲ့ အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၁၆)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၁၉၉၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အကျဉ်းချုပ်
Host Country – United States
Dates – 17 June – 17 July (31 days)
Venue(s) –9(in9host cities)
Champions – Brazil (4th title)
Fourth Place – Bulgaria
Goals Scored – 141 (2.71 per match)
Attendance – 3,587,538 (68,991 per match)
Top Scorer(s) – Hristo Stoichkov (Bulgaria), Oleg Salenko (Russia) –6goals each
Best Player – Romário (Brazil)
Best Young Player – Marc Overmars (Netherlands)
Best Goalkeeper – Michel Preud’homme (Belgium)
Fair Play Award – Brazil
Photo:isvdb, LA Galaxy, Goal.com
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၁၅)
အမရေိကနျနိုငျငံက ကမ်ဘာ့ဖလား သမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ကို ရရှိခဲ့ပွီး တဈပှဲ ပြှမျးမြှပရိသတျ (၇၀၀၀၀)နီးပါးအထိရှိခဲ့လို့ ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးတဈလြှောကျ ပရိသတျအမြားဆုံး ကွညျ့ရှုတဲ့ ပွိုငျပှဲအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့တယျ။ အခုတဈကွိမျပွိုငျပှဲမှာလညျး ပွောငျးလဲမှုတှေ အမွောကျအမြားရှိခဲ့တယျ။ နိုငျပှဲ (၁)ပှဲကို (၃)မှတျ စတငျသတျမှတျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး ကစားသမားတှရေဲ့ ဂြာစီမှာ နာမညျရေးထိုးခွငျးကို ပထမဆုံးအကွိမျပွုလုပျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈတယျ။ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ နရောလိုကျ အကောငျးဆုံး ကစားသမားတှကေို ရှေးခယျြကာ အကောငျးဆုံးအသငျး (All Star)ကို စတငျရှေးခယျြမှု ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲလညျးဖွဈခဲ့တယျ။
အုပျစုပှဲစဉျအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့ အိမျရှငျအမရေိကနျနဲ့ ကိုလံဘီယာတို့ရဲ့ ပှဲစဉျမှာ ကိုယျ့ဂိုးကိုယျသှငျးမိခဲ့တဲ့ ကိုလံဘီယာနောကျခံလူ အကျဈကိုးဘား မိခငျနိုငျငံကို ပွနျလညျရောကျရှိပွီး (၅)ရကျအကွာမှာပဲ သနေတျသမားတှရေဲ့ ပဈခတျမှုကွောငျ့ အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီး လကျရှိအခြိနျအထိ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ ဝမျးနညျးဖှယျဖွဈရပျတဈခု ဖွဈခဲ့တယျ။ ဗိုလျလုပှဲကို ဘရာဇီးလျအသငျးနဲ့ အီတလီအသငျးတို့ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီး ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျအထိ ခံယူခဲ့ရကာ ပထမဆုံး ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ ခံယူခဲ့ရတဲ့ ဗိုလျလုပှဲအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျ ခံယူရာမှာတော့ အီတလီအသငျးရဲ့ နာမညျကြျော တိုကျစဈမှူး ဘကျဂီယိုရဲ့ ကနျခကျြ လှဲခြျောခဲ့လို့ ဘရာဇီးလျအသငျးက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရကာ (၄)ကွိမျမွောကျ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံဆုကို ရရှိတဲ့ အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျနိုငျခဲ့တယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၁၆)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၁၉၉၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အကဉျြးခြုပျ